Ndabere AFC System pụtara Akụrụngwa Nchịkọta Akụrụngwa, ọ bụ sistemụ netwọk na-akpaghị aka nke ire tiketi, na-akwụ ụgwọ, ịlele na ọnụ ọgụgụ maka njem ụgbọ okporo ígwè. Usoro a dabere na kọmpụta, Nkwukọrịta, netwọkụ na njikwa akpaka. AFC nwere ike kewaa ...
Ndabere Ndabere Onye na-azụ ahịa taa na - achọ - ọ ga - agbanwe ntụkwasị obi ha na ụdị ndị ọzọ mgbe atụghị anya atụmanya. Shoppingzọ ịzụ ahịa na-agbanwe agbanwe na-amanye ndị na-ere ahịa ka ha nyochaa ahụmịhe ha na-echekwa ọ bụghị naanị ịdọta ndị ahịa ọhụrụ, kama ịchọta ụzọ ọhụrụ iji jigide ndị ahịa dị ugbu a ...
Nchịkọta Ndabere N'okpuru asọmpi ahịa dị egwu, ahịa ọrụ traditionalntanetị (ISPs) ọdịnala na-adịwanye njọ (dịka ọmụmaatụ, brọdband, MPLS VPN na SMS). Ka ọ dị ugbu a, ọgụgụ isi (AI), Virtual Reality (VR), nnukwu data nchịkọta, na igwe ojii kọwaa: ...
DCN IP Nyocha Network Solution
A na-ejikwa ihe nlekota onyunyo IP eme ihe na ụlọ ọrụ niile, dị ka: · Agụmakwụkwọ: Nlekota ime ụlọ egwuregwu, paseeji ime ụlọ, ụlọ nzukọ na klaasị, yana ụfọdụ ụlọ; Gbọ njem: nlekota nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ ụgbọ oloko, okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ elu ...
Ndabere nke Networklọ Ọrụ Ntanetị Network Ndị nwere ọgụgụ isi na-aghọ ngwaọrụ ndị dị mkpa maka ndụ anyị kwa ụbọchị. Mgbe ị na-eme njem, ị nwere ike ịchọ ha ịrụ ọrụ ọfịs ahụ, isonye na nzukọ dịpụrụ adịpụ, ịde akwụkwọ ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ elu, ịnata na izipu ozi e-mail, wdg. Ya mere ...
DCN Health Network Network Ngwọta
Ihe omuma banyere ulo oru nlebara anya nke ulo ogwu, ndi ulo ogwu na enye ndi mmadu oria di iche iche dika ndi nlebara anya, ndi ogwu, ndi umu nwanyi na ndi omumu. Iji nye nlekọta ahụ ike kachasị mma, na-eji njedebe na-achọpụta ihe t ...
DCN Data Center Ngwọta
Ndabere Ozi Ojiji zuru oke nke igwe ojii kọwapụta, nnukwu data na ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ maka mwepụta nke ọrụ ọhụrụ yana ịmepụta ọtụtụ data etiti okporo ụzọ. Nke a chọrọ nzaghachi ngwa ngwa site na ntanetị data data. DCN data center network solution na-enye ndị ahịa ụlọ ...
Ndabere Ozi Mmepe ngwa ngwa nke Internetntanetị, ọkachasị ịba uru, igwe ojii, teknụzụ ndị a na-agbanwe mgbanwe na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ. Isgwé ojii bụ ihe nnọchianya kasịnụ na agụmakwụkwọ bụ isi na agụmakwụkwọ ka elu. Accessdị mfe inweta agụmakwụkwọ bụ isi ...